၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ – Pann Satt Lann Books
ကိုကိုကြီး, ကျော်ဝင်း, မင်းသေ့
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ #အမြင်များ #သုံးသပ်ချက်များ
မိမိကြီး(IR)၊ မင်းဇင်၊ ကျော်ဝင်း၊ ကိုကိုလှိုင်၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ စိုင်းညွှန့်လွင်၊ စိုင်းကျော်ညွှန့်၊ ကိုကိုကြီး၊ ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ မောင်အောင်မျိုး၊ မသီတာ (IR)၊ မင်းသေ့၊ ဒေါက်တာလူဇော်၊ ကျော်နိုင်စိုး (IR)…. အစရှိသည့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ထဲထဲဝင်ဝင် လှုပ်ရှားသူတို့နှင့် လေ့လာသူတို့၏ နိုင်ငံရေးအမြင်သုံးသပ်ချက်များစွာကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖြစ်စဉ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်သည်ဟု ယူဆလျှင် ယခုဆို (၁၀)နှစ်သက်တမ်းသို့ ရောက်လာခဲ့ပြီ။ ၁၀ နှစ်သက်တမ်းနှင့်အညီ ဖြစ်ထွန်းလာသော နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုဖြစ်တည်နေသင့်ပြီ။ သို့သော် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှ ပေါ်ထွက်လာသော နိုင်ငံရေးပါတီများလည်း ရှိသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တန်းညီသော ရွေးကောက်ပွဲယှဉ်ပြိုင်မှုများ ဖြစ်တော့မည်မဟုတ်။ ပါတီများ၏ စုဖွဲ့နိုင်မှု၊ ကိုယ်ခံအားနှင့် သက်လုံအပါအဝင် လူကြိုက်များရေပန်းစားသည့် ခေါင်းဆောင်မှုတို့က ရွေးကောက်ပွဲအဖြေကို ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်….
ဤ စာအုပ်သည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းအတွက် ဟောကိန်းမဟုတ်ပါ။ ရှေ့ကြည့်၊ မျှော်ကြည့်၊ ဆင်ခြင်ကြည့်ရန် ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ သိုင်းဝိုင်းယူဆထားသော အမြင်များကို စုစည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အမြင်အပေါင်းအစုဟု ပြောလျှင် မမှားနိုင်ပါ။ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်ကောက်နှုတ်ချက်)
Impact Magazin၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ
“၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ” စာအုပ်အပေါ် လူကြီးမင်း၏ အမြင်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်... Cancel reply